July 2012 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 11:48 PM | 1 Comment |
ပြောရင်လည်း ကြိုက်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ စာဖတ်ခြင်း လေ့လာခြင်းတွေလည်း အလွန်ပဲ အားနည်းလာ ကြတယ်။ တစ်ထွာပြရင် တစ်တောင် မြင်တာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ တစ်သံကြားရင် ဆယ်သံစာလောက် ချဲ့ကားပြောကြတယ်။ ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ ဗျုပ္ပတ်တွေ ထွင်လာကြတယ်။
အစိုးရ မဖြစ်မီနှင့် ဖြစ်အပြီး
by 7Day News Journal on Tuesday, July 31, 2012 at 10:14pm ·
ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုဆိုကာ ကိုယ့်မျက်လုံးကို ကိုယ်ပြန်ပွတ်သပ်ပြီး နောက်တစ်ခါ ပြန်ကြည့်ရသည့် သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ယခုရက်ပိုင်း ကလေးများအတွင်း သတင်းစာမျက်နှာများပေါ်၌ ဖတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက်မရှိခဲ့ဖူးသည့် သတင်း။ Clean Government ခေါ် သန့်ရှင်းသော အစိုးရအတွက် မရှိမဖြစ်သတင်း၊ Good Governanceခေါ် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် အလိုအပ်ဆုံးသတင်း။
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာ ရှိသမျှကို အိတ်သွန်ဖာမှောက်ချပြထားကြရလေမတဲ့။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအ ဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအ ဖွဲ့ဝင်များသည် မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထုတ်ဖော်ကြေညာကာ မှတ် တမ်းတင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာမဲ့တွေရေ၊ ဒါ နိုင်ငံအတွက်ပါ။ ပြည်သူတွေ အတွက်ပါ။
Author: lubo601 | 10:44 PM | No မှတ်ချက် |
by Than Saw on Tuesday, July 31, 2012 at 7:13pm
နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးအတွက်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာ ဘုရင် မိဖုရားတွေ၊ ဘုရင် မယားမြှောင် အမှတ် ၆၀၀ မှ ဆင်းသက်လာကြတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ တခြား လူဘုရားထီး လူဘုရားမ အရိုးတွေကို ထိုင်ရှိခိုးကြတာကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။
ဒီအရိုး ဓါတ်တော်တွေ ရုပ်ထုတွေ ဓါတ်ပုံတွေ အဝတ်အစားဟောင်းတွေကို ကိုးကွယ်ပြသတာဟာ နိုင်ငံအတွက် အင်မတန် အကျိုးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေကို သင်္ချုင်းဝင်ခွင့်လက်မှတ်တွေ၊ ပြတိုက်ဝင်ခွင့် လက်မှတ်တွေ ရောင်းစားပြီး နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။
by Myanmar Journal on Tuesday, July 31, 2012 at 6:20pm ·
အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် ၁၉ ခုနဲ့ ဆုတံဆိပ် အများဆုံး စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်ဖဲ့
မိုက်ကယ်ဖဲ့ အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် စံချိန်တင်ရ
အမေရိကန်က နံမယ်ကြီး ရေကူး သမား Michael Phelps ဟာ လန်ဒန် အိုလံပစ် စတုထ္ထနေ့မှာ ရွှေတခုနဲ့ ငွေတခု ထပ်ယူခဲ့ပြီး နောက် စုစုပေါင်း အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် ၁၉ ခုနဲ့ ဆုတံဆိပ် အများဆုံး ရတဲ့ အိုလံပစ် အားကစား သမား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သက်ဆုံးတိုင် ပူးကပ်နေမည့် ဝိညာဉ်များ
by Win Ko on Tuesday, July 31, 2012 at 7:08pm
မိသားစုနေထိုင်ရာ အသိုက်အမြုံလေးထဲသို့ သြဂုတ်လမိုးစက်တို့က အတားအဆီးမဲ့စွာ ခုန်ဆင်းလျက် ရှိနေသည်။ ပြိုကျစီးဆင်းလာသော သြဂုတ်လမိုးစက်တို့က အတိတ်တစ္ဆေအလား ကျနော့်ထံ ဝင်ရောက်ပူးကပ်၍ ခန္ဒာကိုယ် သွေးကြောအနှံ့ ပြန့်ဝင်စီးမျောလျက်ရှိသည်။
၁၇၊၀၇၊၂၀၁၂ ရက်နေ့ထုတ် news watch weekly ဂျာနယ် ပါ ဆောင်းပါးလေးပါ။ သောကြာသမီး ရေးသားခဲ.တာပါ ပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်လို. ပြန်လည်ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ယခင်ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာတွေ ဆီကြိတ်ဆုံကြီးများ သုံးကာ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီစစ်စစ်များကို စားသုံးလာသော်လည်း ယနေ.ခေတ်တွင်တော.တိုးတက်လာပါသည်ဟုဆိုကာ အဆင်သင်.(ရယ်တီမိတ်)တွေဖြစ်လာသည်။
သင်သည် ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသလဲ (What type of communicator are you? by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on June 22, 2012
နှုတ်နဲ့ ပြောဆိုတာချင်း တူပေမယ့် လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ ပြောဆိုတာနဲ့ အလုပ်ထဲမှာ ပြောဆိုတာ
လိုအပ်ချက်ချင်း အများကြီး ကွာခြားပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ နှုတ်နဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမယ်ဆိုရင် ၀န်ထမ်းများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အဓိက ဆက်သွယ်ပြောဆိုပုံဟန်ကို သိရှိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုပုံဟန် ဘယ်လို ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိရပါမယ်။ ၀န်ထမ်းများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ဟန်နဲ့ မတူညီတဲ့ အခြားသော ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ချဉ်းကပ်ပုံများကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်ရပါမယ်။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ဟန် မတူညီသူနဲ့ ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းမှုတွေလည်း ပြုလုပ်တတ်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဟန်နဲ့ တစ်ဖက်သားရဲ့ ဟန်တို့ကို သိရှိနားလည်ခြင်းဖြင့် နောင်အခါ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာမှာ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိစေနိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု မဟာဗျူဟာတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည့် ကျော်ကျော်မျိုးနှင့် စကားပြောခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်အတွက် ရွေးချယ်ခံထားရသည့် ကမ္ဘောဇအသင်းမှနောက်တန်းကစားသမား ကျော်ကျော်မျိုးအား အသင်း၏ပြန်ကြားရေးအရာရှိကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်ကို kbzfc.com မှတဆင့် ပြန်လည်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် ကောင်းမွန်သောအစိုးရ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်
by Duwa Kachin on Friday, June 22, 2012 at 9:26am
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မြင့်မားနေခြင်းသည်၊ အနောက်နိုင်ငံများ၏ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (Sanction) ကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ လို့ စစ်ခေါင်းဆောင်များ က ဝေဖန်တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။
Author: lubo601 | 2:37 PM | No မှတ်ချက် |
by Lu Cifer on Tuesday, July 31, 2012 at 7:06am
by Lu Cifer on Tuesday, July 31, 2012 at 6:42am
ယခုလအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပြည်နယ်တခုတွင် အမျိုးသမီးတဦးအား ကာယအိနြေ္ဒ ပျက်ပြားသည်အထိ စော်ကားမှုသည် ပြည်သူများကြားတွင် အထိတ်တလန့် ဖြစ်ပေါ် စေခဲ့သည်။
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ သမ္မတထံတင်ပြရမည်
by Mizzima - News in Burmese on Tuesday, July 31, 2012 at 7:58am ·
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ အပါအဝင်၊ သမ္မတက ခန့်အပ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ် ၇ မျိုး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တန်ဖိုးနှင့်အတူ စာရင်းပြုစု၍ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သမ္မတထံ ပေးပို့ကြရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ညွှန်ကြားချက်တရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဟု သမ္မတရုံး အကြီးတန်း အရာရှိတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြော သည်။
Microsoft Office 2013 အကြောင်း သိထားသင့်သမျှ
by Internet Journal on Tuesday, July 31, 2012 at 4:19am ·
Windows 8 အတွက် အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်ထားပြီး tablet တွေပေါ်မှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် နောက်ဆုံးပေါ် Office ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ Microsoft Office 2013 ကို မကြာသေးမီ Microsoft ကုမ္ပဏီက မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်မှု ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးရန် မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်မှ တောင်းဆို
by Yangon Press International on Tuesday, July 31, 2012 at 9:20am ·
ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၂ ၊ YPI
စာပေ စိစစ်ရေး မှ သတင်းဂျာနယ် ၂ စောင်ကို ထုတ်ဝေခွင့် အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပေးရန် ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်သည့် မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက် MJN မှ တောင်းဆိုသွားရန် ယနေ့ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယနေ့ညနေ ပြုလုပ်သည့် MJN အစည်းအဝေးမှ ယခုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ယင်းအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သူ သတင်းအယ်ဒီတာ တဦးက ပြောသည်။
"ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးကို ထိပါးနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့်ဥပဒေ" (မောင်ဝံသ)
by Maung Wuntha on Tuesday, July 31, 2012 at 10:09am ·
ပညာရှိချင်း ခေါင်းတိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့ စကား ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ အဲသလို အတွေ့အကြုံ မကြာခဏ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အခြားသူတစ်ယောက်ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ကျွန်တော့်ဘာသာ သင့်မယ်ထင်လို့ ရွေးချယ်ပြီး ရေးလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချိန်တည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒါကို ပညာရှိချင်း တွေးပုံချင်းတူတယ်ါမနအောနည အ့ငညုေူငုန လို့ ဂုဏ်ယူပြီး ပြောလေ့ရှိတယ်။
အမှတ်တရဖေဖေ (စောဘဦးကြီး) သားဖြစ်သူ မိုက်ကယ်ကြီး ရေးသည်။
Author: lubo601 | 2:14 PM | No မှတ်ချက် |
by တကျော့ ပြန်ဟစ် တလာ on Tuesday, July 31, 2012 at 12:15pm ·
Posted by အဲခေါင်သောင့် at 3:23 PM
စောဘဦးကြီး၏သား မိုက်ကယ်ကြီး သူမကွယ်လွန်မှီက ရေးသားထားသည့် ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သူ့အရပ်က ၅ ပေ ၈ လက်မရှိပြီး ဆံပင်ကိုသေသပ်စွာနောက်ပြန်ဖြီးလေ့ရှိတယ်။ ပခုံးကျယ်ပြီးကြွက်သားလှိုင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ယောက်ျားပီသပြီး အလွန်ကြည့်ကောင်းသူ တယောက် ဖြစ်တယ်။ လေးထောင့် ကျကျမျက်နှာမှာအပြုံးရိပ်တွေ အမြဲ ဝေနေပေမဲ့ လေးနက်တည်ကြည်စွာ ခန့်ညားနေတဲ့သူ့ကို ကင်းဘရေ့ဂ်ျတက္ကသိုလ်(Cambridge University) မှခင်မင်သူ မိတ်ဆွေတွေက ဖရက်ဒ်အလဲန်(Fred Allen) လို့ခင်မင်စွာခေါ်ကြတယ်။
အမြဲလိုလို မျက်မှန်တပ်ထားလေ့ ရှိတဲ့သူ့ကို ဓာတ်ပုံထဲမျက်မှန် မပါဘဲတွေ့ရတော့တမျိုးလေးဆန်းနေ သလိုပါဘဲ။
ရှစ်..သုံးလီ နှင့်..၈၈၈၈ အတွေးစများ
by Robina Lwin on Tuesday, July 31, 2012 at 12:43pm
၂၀ ကျော် ငါးနှစ် ပတ်လည်..ကျမ..ကျမ..တို့ အရွယ်……………..
ရှေ့ခေတ် နံမည်ရ..သီချင်းလေးနဲ့ ..ယနေ့ ခေတ်ပေါ် အက ကို ခပ်ဟော့ဟော့လေး
က..ပြီး ဘရုတ်ကျနေတဲ့..ကောင်မလေးတွေကို ပြုံးလိုက်မိတယ်..လန်းနိုင်တုံး အ
ရွယ် မို့လန်းကြ ရတာ မဟုတ်လား…
by Zay Ya on Sunday, January 8, 2012 at 9:34am
သေးငယ်သော အရာသည် လွင့်ပါသွားဖို့ရာ လွယ်ကူသည်။
မရင့်မြည့် ခင်ကတည်းက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အပ်၏။
by Phio Thiha on Saturday, July 28, 2012 at 3:05am
မနေ့က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သွားမှာဖြစ်နေသည့် ကျောက်တွေကို ခြစ်ပစ်ချင်သည်၊ အဖော်လိုက်ခဲ့ပေးပါ ဆိုသဖြင့် မြို့ထဲက သွားဆေးခန်းတစ်ခုကို နှစ်ယောက်သား သွားခဲ့ကြသည်။
Author: lubo601 | 12:56 PM | No မှတ်ချက် |
ရေးသားသူ နိုင်လင်းထွန်း သည် ဇူလိုင်လ 31, 2012 တွင် 5:32pm အချိန်၌ရေးသားခဲ့သည်။စာပေးမယ် ဘလော့ ပို့(စ်)ကြည့်မယ်
ဟုတ်ကဲ့ ... ယခုတစ်ခါ ``မြန်မာအိုင်တီနန်းတော်´´ ရဲ့ ၀တ္ထုတိုပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပတာသိရတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းများအတွက် ၀တ္ထုတိုရေးသားနည်းကို မျှဝေရရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး စိတ်ကူးပေါ်လာလို့ နောက်ပြီး အကြောင်းလည်း တိုက်ဆိုင်လာလို့ မျှဝေလိုက်တာပါ။
Author: lubo601 | 12:51 PM | No မှတ်ချက် |
တက္ကသိုလ်နဲ့ ကျောင်းတွေကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေး (ရုပ်/သံ)
တောင်ငူ၊ ဘားအံနှင့် ရွှေကျင်မြို့တို့တွင် မြစ်ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေအထွေဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးပွဲကြီးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း ကို ကြေညာအသုံးပြုခဲ့ပြီး (၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Palais de Chaillot တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။)။
အနောက်ဘက်တံတိုင်းသို့ လှမ်းကြည့်ခြင်း (၂) (၃)
by ငြိမ်းအေးအိမ် on Monday, July 30, 2012 at 6:22am ·
မြေပုံများပေါ်တွင် နိုင်ငံနယ်နမိတ်များသည် လှပပျော့ပြောင်းစွာ ကွေးညွှတ်နေသည်ကို မြင်တွေ့ဖူးကြ ပါလိမ့်မည်။ အမှန်တော့ ထိုအရာများသည် စိတ်ကူးမျဉ်းများမျှသာဖြစ်၏။ အချုပ်အခြာ အာဏာကိစ္စအတွက် ရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားကြရခြင်းသာဖြစ်၏။ တကယ့်မြေပြင်တွင် ထိုမျဉ်းများမရှိ။ မျဉ်းမရှိသော မြေများပေါ် တွင် လူ့မျိုးနွယ်စုတို့သည် အဆင်ပြေရာ၊ အနွယ်တူရာ စုနေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်မျဉ်းများတွင် ရှိနေကြသော ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားများနှင့် “မျိုးတူ”များသည် နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည့် သက်ဆိုင်ရာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်လည်း ရှိနေကြသည်သာဖြစ်၏။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက နိုင်ငံတကာသို့ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
Author: lubo601 | 12:47 AM | No မှတ်ချက် |
by Ko Kyi Win on Monday, July 30, 2012 at 4:09am
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနေလိုသော နိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးသော မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက် အနေနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၊အစိုးရအဖွဲ့များ၊ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ သို့ အောက်ပါအတိုင်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ရှေးယခင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှေးမြန်မာဘုရင်များ လက်ထက်ကထဲက လူမျိုးစုံ ဘာသာတရားမျိုးစုံနှင့် အတူ အေးအတူပူအမျှ ကောင်းတူဆိုးဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်နေခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါသည်။
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Good/Hope/Is it/Far/Give)
Author: lubo601 | 12:25 AM | No မှတ်ချက် |
Posted by Language Republic on June 26, 2012 at 13:22
That's no good (အဲ့ဒါက အဆင်မပြေဘူး)
အဲ့ဒါက အဆင်မပြေဘူး that’s no good သည် တစ်စုံတစ်ခုသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောအခါ (သို့) မသင့်တော်သောအခါ (သို့) အဆင်မပြေသောအခါတွင် အသုံးပြုသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
We haveaone-bedroom holiday flat left. That's no good, unfortunately. There's my wife and myself and two children.'
ကျွန်တော်တို့မှာ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းပါ ပိတ်ရက်သုံး တိုက်ခန်းတစ်ခန်း ကျန်သေးတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ အဲဒါက အဆင်မပြေဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပြင် အမျိုးသမီးနဲ့ ခလေးနှစ်ယောက်ပါရှိတာ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ခေါင်းပါပဲကွာ ဆိုတဲ့...... ဦးလေးကိုဖိုးမြစ်
Posted by aung htet on July 31, 2012 at 9:00amSend Message ဘလော့ ပိုစ်ကြည်မယ်
အမေ့ဇာတိက..ခုကျွန်တော်အမေနေတဲ့ မြို့လေးနဲ့သုံးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့အိမ်ခြေ ခုနစ်ဆယ်လောက်ရှိတဲ့တောရွာလေးပါ။
Author: lubo601 | 12:01 AM | No မှတ်ချက် |
by Sein Khat Soe on Monday, July 30, 2012 at 11:57pm ·
တခါတုန်းက တောအုပ်တစ်ခုထဲမှာ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ဖီဒယ်ကက်စထရိုတို့ ပျောက်ကျားတပ်စုကို ဘာတစ်စတာ အစိုးရတပ်တွေဝိုင်းမိပြီး စစ်ဆေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကက်စထရိုကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ အသေပစ်သတ်ဖို့ လျှို့ဝှက်အမိန့် ထုတ်ထား တဲ့အချိန်ပါ။ အဲဒီ ပျောက်ကျားတပ်သားတစ်ယောက်ချင်းစီကို လက်မျြောက်ခိုင်းထားပြီး ရှာတဲ့ အချိန်မှာ အရာရှိလေးတစ်ယောက်က ကက်စထရိုကိုစစ်ရင်းတိုးတိုးလေးကပ်ပြောတာက “ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ကက်စ ထရို လို့လုံးဝမပြောပါနဲ့”တဲ့။ ဘာတစ်စတာ အစိုးရ တပ်ကအရာရှိတစ်ယောက်၊ ကက်စထရိုကို သတ်နိုင်ရင် ရာထူးလည်း ရနိုင်သလို၊ သူ့အနာဂတ် အခွင့်အရေးတွေအများကြီး၊ ဒါပေမယ့် တကယ်လုပ်သွားတာက ကက်စထရိုကို တိုးတိုးတိတ် တိတ်ကယ်တင်သွားတာပါ။
Author: lubo601 | 11:58 PM | No မှတ်ချက် |
by စာကြည့်တိုက်(ရွှေအိမ်စည်စာပေဒါနပြုပါသည်) on Monday, July 30, 2012 at 2:17am ·
မဟာဗန္ဓုလသည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသော စစ်သူကြီး ဖြစ်သည်။ ရွာငယ်လေးတွင် မထင်မရှားသော အမျိုးအနွယ်မှ ဖွားမြင်ခဲ့သော်လည်း ရဲစွမ်းသတ္တိရှိ၍ စစ်ရေးစစ်ရာတွင် ထူးချွန်သောကြောင့် စစ်သူကြီးဖြစ်လာသူ ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့အမည် အပြည့်အစုံမှာ စစ်သူကြီး သတိုးဓမ္မမဟာဗန္ဓုလ ဖြစ်သည်။ သတိုးဘွဲ့သည် မင်းညီမင်းသားတို့သာ ခံယူရရှိသည့် ဘွဲ့ဖြစ်သည်။ စစ်သူကြီးဘွဲ့သည် အိမ်ရှေ့မင်းသားတို့သာ ရရှိသော ဘွဲ့ဖြစ်သည်။ အရည်အချင်း အထူးပြည့်စုံလှ သဖြင့် ထိုဘွဲ့များ ပေးအပ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
မဟာဗန္ဓုလ၏ ငယ်မည်မှာ မောင်ရစ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၄ ခု (ခရစ်နှစ် 1782 ) တွင် အလုံတိုက်နယ် ငပယင်းရွာတွင် ဖွားမြင်သည်။ အဖ ဦးပေါက်တော အမိ ဒေါ်မိငြိမ်းတို့၏ သားဖြစ်သည်။
Author: lubo601 | 11:54 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 11:48 PM | No မှတ်ချက် |
by Ko Kyi Win on Monday, July 30, 2012 at 7:20pm
Author: lubo601 | 11:43 PM | No မှတ်ချက် |
by Min Kyaw Khine on Monday, July 30, 2012 at 7:24pm
ကမ္ဘာမှာ စစ်ပွဲတွေအများကြီးထဲက အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ အကျော်ကြားဆုံးကတော့ အီစရေး တွေရဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာ ကိုတိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခြောက်ရက် စစ်ပွဲတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်ရက် စစ်ပွဲအကြောင်း စာအုပ်တွေလဲ အများအပြား ပုံနှိပ် ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ စာအုပ်တိုင်းရဲ့ အာဘော်တွေလဲ မတူကြပါဘူး။ တချို့က ဦးဆောင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ချီးမွမ်းထား သလို၊ တချို့လဲ ဘာသာရေးအရ ယုံကြည်ခြင်းကို ဖေါ်ကျူးကြပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ သဘောထား တခုတူနေတာကတော့ လူအင်အားနဲ့ လက်နက်အင်အား မမျှတဲ့ ကြားက နိုင်အောင်တိုက်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ သူတို့ဘယ်က စွမ်းအားတွေ ရရှိခဲ့ပါသလဲ။
by Aung Myo on Monday, July 30, 2012 at 8:04pm
by FNG on July 27, 2012
မင်းရွှေမောင် မူရင်း သတင်းဆောင်းပါး ဖော်ပြထားသည့် ဈေးကွက် ဂျာနယ်
George Soros ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ သိကြမှာပါ။ မကြာသေးမီ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က သူ့မိသားစုနဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားခဲ့တယ်လို့ မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာတော့သူ့ကို ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေး အားပေးအားမြှောက် လုပ်ပေးသူလို့ သိထားကြတယ်။
နေတဲ့နေရာထက် ထားတဲ့ စိတ်ထားလေးက တန်ဖိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်
မရောက်ဘူးသေးတဲ့ ဒေသတစ်ခုကို ခိုင်လေး အလည်ပတ်ရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ မြင်ကွင်းအသစ်၊ ဓလေ့ အသစ်တွေနဲ့ လူတွေကို မြင်တွေ့နေရတာ ခိုင်လေးအတွက် သိပ်ကို ထူးဆန်းလွန်းနေသလို ကိုယ်မြေ ကိုယ်ရေကိုလည်း ပိုလို့တောင် လွမ်းဆွတ်မိလာပါတယ် ။
Ko Thann Htun Oo
"ကျွန်တော့်အသည်း မာခဲ့ဖူးပါတယ် "
ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ အသည်းရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသံတွေကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားလာရတယ်။ ဘီပိုး၊ စီပိုးနဲ့ အသည်းခြောက်တာတဲ့။ ခန္ဓာရှိရင် ရောဂါရှိမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အရက်သောက်ရင် အသည်းရောဂါဖြစ်တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ခဲ့တာ ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ ။ ဗမာပြည်မှာက ပြည်သူကိုအနိုင်အထက်ပြု အုပ်စိုးနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက သမိုင်းတွေကိုဖျောက်ဖျက် ပစ်တာ၊ သမိုင်းမှားတွေ လုပ်ပစ်တာ မျိုးတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီ၂၄ နှစ်တာကာလမှာမှ မွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ အဲဒီအချိန်က မူလတန်းအောက် မှာပဲ ရှိဦးမဲ့လူငယ်တွေ ၊ ကျောင်းသားတွေ အများစုဟာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ် မှန်တွေကို မသိကြရပါဘူး ။
အာဏာရှင်တွေက ဒီလောက် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလ မဆိုထားနဲ့ နေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတောင် ပြည်သူတွေ သတင်းမှန်ဖြစ်ရပ်မှန်မသိအောင် ဖျောက် ဖျက်လိမ်ညာဖုံးကွယ်နေတာပါ ၊ အားလုံးလက်လှမ်းတမှီရှိမဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလို့ တင်စားကြတဲ့ ၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာက သံဃာတော်တွေမေတ္တာပို့ စီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲကိုတောင် သံဃာအတုအယောင်တွေကလုပ်တာပါ ဆိုတာမျိုး ဒီမကြာသေးတဲ့ကာလတိုလေးက ဖြစ်စဉ်ကိုတောင် လိမ်ညာဖျက် ဆီးနေတာပါ ။
ရေးသားသူ Z M O သည် ဇူလိုင်လ 30, 2012 တွင် 7:14pm အချိန်၌ရေးသားခဲ့သည်
မြန်မာဟာသ - စုစည်းမှု (၄)
Mr. Jugger juggernaut.mm@gmail.com
ရုပ်အရမ်းဆင်တဲ့ အမွှာညီအစ်ကိုနှစ်ဦးရှိတယ်။ အစ်ကိုဖြစ်သူမှာ
လှေအိုတစ်စီးရှိပြီး ညီဖြစ်သူမှာ ရောဂါထူတဲ့ မိန်းမတစ်ဦးရှိတယ်။ တစ်နှစ်မှာ
ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးစလုံး ကံမကောင်းခဲ့ဘူး။ အစ်ကိုရဲ့ လှေမြှုပ်သွားခဲ့သလို
ဆိုးရွားခဲ့သည့်ဟန်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် မျိုးချစ်အမျိုးသားရေးအင်အားစုတစ်ရပ် အပေါ် အများနှင့်မတူသောအမြင်မှ ချဉ်းကပ်ကြည့်ခြင်း
by ပစ်တိုင်းထောင် ပစ်တိုင်းထောင် on Friday, June 8, 2012 at 7:23pm ·
ယခုအယူအဆသည် ကျွန်တော် ပစ်တိုင်းထောင် ၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်သာဖြစ်ပြီး မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း ၊ ပါတီ ၊လူပုဂ္ဂိုလ် ၏ တိုက်တွန်းခြင်းကြောင့် ရေးသားရခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်း စာရှုသူတို့ အား လေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့မျိုးချစ်တပ်မတော်ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မျိုးစေ့ချပေးခဲ့သော မျိုးချစ် တပ်မတော်ကြီးကို အင်အားခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် တည်ဆောက်ခဲ့သော တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း နှင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းဖြိုးကောင်စီဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သော ၊ မြန်မာသမိုင်းတွင် ကမ္ဘာကရောမြန်မာလူထုကပါ အာဏာရှင် ဟု သမုတ်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) သန်းရွှေနေရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်စိတ်ကူးဖြင့် စဉ်းစားကြည့်မိသည် ကိုပြောရမည်ဆိုလျှင်
Voice Weekly ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ရေးသားချက်
"စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်"(အပိုင်း-၂)
Author: lubo601 | 12:50 PM | No မှတ်ချက် |
အသိတရားလေး ရလာသလိုရှိသည်နှင့် အနည်းဆုံးတော့ ဆယ်ကျော်သက်ထက် ရင့် ကျက်လာဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပြုရန် ... ကြိုး စားကြည့်၏။ ဦးစွာ ကြိုးစားသည်က လူငယ် လေးတွေအပေါ် နားလည် ပေးနိုင်ဖို့ သူတို့ စကားတွေကို နားထောင်ပေးခြင်းဟု ဆိုရမည်။ "အဲဒီမှာစတွေ့တာပဲ" ဟူသည့်စကားလို ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် ညီငယ်လေးတစ်ဦး ကို ဆုံကြည့်လိုက်သည်နှင့် "တွေ့"ရပြီ။
မြန်မာပြည် အနောက်မြောက်ဖျား ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက် အာရပ် ၅ နိုင်ငံတွင်စစ်သင်တန်း တက်နေသည်ဆိုခြင်း......
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဖျားတွင် အီဆလင်မစ်ရီပါပလီအော်ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံ (Islamic Repubilc of Rohingya)ထူထောင်ရေးအတွက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အာဖဂန်နီစတန်နိုင်ငံ၊ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံ နှင့် ဆောဒီအာရေဗျား နိုင်ငံများတွင် လွန်ခဲ့သော (၁၉၉၉)ခုနှစ် မှစတင်ကာ စစ်သင်တန်းများ တက်ရောက် လျှက်ရှိနေကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အစိုးရမှ ဖမ်းဆီးရမိသော အာမစ်ချားဆိုသူ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ သိရှိကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံထုတ် The Daily Matriteemi သတင်းစာဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၇၊၀၇၊၂၀၁၂ ရက်နေ့ထုတ် news watch weekly ဂျာနယ် ပါ ...
သင်သည် ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသလ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည့် ကျော်ကျော်...
နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် ကောင်းမွန်သောအစ...
ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်မှု ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ြ...
အမှတ်တရဖေဖေ (စောဘဦးကြီး) သားဖြစ်သူ မိုက်ကယ်ကြီး ရေ...
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက နု...
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Good/Hope/...
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ခေါင်းပါပဲကွာ ဆိုတဲ့...... ဦးလေးကိ...
နေတဲ့နေရာထက် ထားတဲ့ စိတ်ထားလေးက တန်ဖိုးရှိဖို့လို...
ဆိုးရွားခဲ့သည့်ဟန်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် မျိုးချစ်အမ...
မြန်မာပြည် အနောက်မြောက်ဖျား ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံထူထောင...
“ကဗျာဆရာအိုကြီး ဖရော့စ်သို့ ကွန်ပလိန်း” (စိမ်းခက်စ...
အကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်းများကို အရေးယူပေးစေလို
ကင်တားနား ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်အခြေအနေရှင်းပြမည်
မြန်မာဟာသ စုစည်းမှု - (၃)
ပရဟိတ စိတ်ထား ထိုသူများသို့...
အရှင်ဆန္ဒာဓိက ၏ သေနည်းလေ့ကျင့်ခန်း
"စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်"
Mastery and slavery တို့မှ....ခိုးမှု၊ လိမ်မှုနှင်...
အခြေခံအတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲမှု (Radical Shifts in Min...
လူတွေကို ကျွန်မ မုန်းတယ်
ကျွန်တော်နဲ့ အမေ .. ကျွန်တော်နဲ့ သမီး ..
သူရဲကောင်း ဒိုင်ယာရီထဲက လူထု ဦးစိန်ဝင်း
အရေးပါတဲ့ ဘ၀ရဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေ
အတောင်ပံမဲ့တဲ့အိန်ဂျယ် သို့မဟုတ် Jessica cox
တက္ကသိုလ် ကောလိပ် အဆင့် ကျောင်းသား ၉၇၄ ယောက်မှ ငြိမ...
Practical English Introductions - Tips for Your Ne...
အောင်မြင်ခြင်းတွက် ၃၃ ချက်